शीर्ष 10 पैसा विनिमय अंक युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > शीर्ष 10 पैसा विनिमय अंक युरोप मा
पढ्ने समय:4मिनेट(Last Updated On: 01/01/2020)
युरोप पैसा विनिमय अंक पत्ता एक पर्यटक लागि गाह्रो हुन सक्छ. के थप छ, सबैभन्दा ठाउँमा, तपाईं मुद्रा विनिमय दर मा पैसा गुमाउन आशा गर्न सक्छौं. तपाईं बाहिर मदत गर्न, हामी को युरोप मा सबै भन्दा राम्रो पैसा विनिमय अंक सूची गरेका छन्:
मामला मा तपाईं एक एटीएम प्रयोग गर्न चाहँदैनन्, यो शहर भित्र विभिन्न स्थानहरूमा मा पैसा आदान प्रदान गर्न सम्भव छ. त्यहाँ रोम Termini नजिकै धेरै विनिमय अंक हो, रोम मुख्य रेल स्टेशन. तथापि, हामी कासा डेल Turista सिफारिस, जो स्टेशन बाट छोटो पैदल छ.
रोम गाडिहरु गर्न ओस्लो
पैसा विनिमय मिलान
मिलान पर्यटकहरु संभावना भ्रमण गर्न जाँदैछन् मिलान गिरजाघर, जो राम्रो पैसा विनिमय विन्दु हो. को Piazza डेल Duomo मा विनिमय खोज्न, बस एक को गिर्जाघर टाढा मिनेट. यो पनि यात्री चेक स्वीकार, तपाईंले तिनीहरूलाई गर्न हुन भने.
मुद्रा विनिमय पेरिस
पेरिस रोचक पैसा छ, जसलाई केही सताब्दी लागि वरिपरि छन्. तपाईंलाई फेला पार्न सक्छन् तिनीहरूलाई शहर शीर्ष आकर्षण को एक नजिक को धेरै - चाप डी ट्रायोम्फे. हामी सुझाव दिन्छौं एक पी एस परिवर्तन छ, मा 30 बाटो डे Friedland.
पैसा विनिमय बर्लिन
जब तपाईं बर्लिन छन्, त्यहाँ जहाँ दर राम्रो धेरै पैसा विनिमय स्थलहरू छन्. तथापि, हामी तपाईंलाई राम्रो दरहरू लागि शाखा स्थानहरू यूरो परिवर्तन खोज्न सुझाव. तपाईं युरोप केन्द्र तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्नुहुन्छ, साथै Alexanderplatz स्टेशन बर्लिन.
मुद्रा विनिमय म्यूनिख
म्यूनिख ठूलो पर्यटक शहर हो, त्यसैले तपाईं संभावित पर्यटक जाल को wary हुनुपर्छ. तथापि, त्यहाँ अझै पनि छन् जहाँ तपाईं पैसा आदान प्रदान र राम्रो दर प्राप्त गर्न सक्छन् स्थलहरू प्रशस्त. रिया मनी ट्रान्सफर र मुद्रा विनिमय तिनीहरूलाई को एक हो. तपाईं Arnulfstrasse मा पाउन सक्नुहुन्छ 1.
पैसा विनिमय लण्डन
बेलायत र राजधानी रूपमा प्रमुख पर्यटक शहर, लन्डन उपयुक्त पैसा विनिमय स्थलहरू भरिएको छ. पाउण्ड आफ्नो पैसा बारी, Covent बगैचा FX या त वा लेस्टर स्क्वायर मा थोमस विनिमय विश्व खोज्न.
मुद्रा विनिमय ब्रसेल्स मा
तपाईं हाम्रो सुझाव पालना भने ब्रसेल्स मा सबै भन्दा राम्रो पैसा विनिमय स्थलहरू पत्ता तपाईं पनि लामो लिनु हुँदैन. तपाईं एक मुद्रा विनिमय प्रत्यक्ष मध्य बजार दर तुलना गरेर तपाईंलाई प्रदान गर्दछ कि दर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ. तथापि, समय बचत गर्न, तपाईं साथै Boulevard Adolphe अधिकतम मा DME परिवर्तन गर्न टाउको सक्छ 11.
पैसा विनिमय बेसल मा
स्विस प्रयोग फ्र्याङ्क, ताकि तपाईं बेसल मा आफ्नो रहन समयमा आवश्यक हुनेछ के हो. यदि तपाईं जाने द्वारा स्विट्जरल्याण्ड गर्न रेल, तपाईं संभावना बेसल मार्फत जाने Bahnhof. त्यहाँ राम्रो दर प्रदान एक Travelex विनिमय यो नजिक छ.
मुद्रा विनिमय एम्स्टर्डम मा
नेदरल्यान्ड मा बैंक सामान्यतया केवल आफ्नो ग्राहकहरु पैसा विनिमय सेवाहरू प्रदान, जो पर्यटकहरुका लागि असुविधाजनक छ. जब एम्स्टर्डम मा, को Damrak बाटो मा परिवर्तन कार्यालय खोज्न. सबै भन्दा लोकप्रिय एक Pott परिवर्तन छ, जो तपाईं निकट पाउन सक्नुहुन्छ शाही महल.
पैसा विनिमय भियना मा
तपाईं भियना मा यूरो आवश्यक हुनेछ. विमानस्थलको र पर्यटक स्थलहरू पैसा विनिमय स्थलहरू लागि safest विकल्प हो. तथापि, हामी सिफारिस ठाउँका एक मोडतर्फ छ, विपरीत सेन्ट. को मेट्रो स्टेशन गर्न Stephens गिरजाघर नजिक. तिनीहरूले पनि यात्री चेक स्वीकार, तपाईंले तिनीहरूलाई भने जो सुविधाजनक हुन सक्छ.
युरोप मा एक छुट्टी मा जा? यी प्रमुख युरोपेली शहर को एक आफ्नो एजेन्डा छ भने, तपाईंको यात्रा योजना र पुस्तक आफ्नो रेल टिकट समयमा!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “शीर्ष 10 पैसा विनिमय अंक युरोप मा” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmoney-exchange-points-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
5 सबै भन्दा राम्रो राष्ट्रिय बिदाहरू मा युरोप अनुभव गर्न
ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्वीडेन, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
रेल सुझाव अनि भाडे युरोप लागि